तपाईले बिहे गर्नु हुँदैन हो ? भनेर सोध्छन् - Sidha News
तपाईले बिहे गर्नु हुँदैन हो ? भनेर सोध्छन्
बीबीसी। २२ बर्ष पुगिन् प्रीति शाक्य । जीवित देवता मानिने कुमारीका रूपमा पुजिएकी प्रीतिका लागि बाह्य समाज अचम्मको छ ।पुरुष र महिलाबीच रहेको भेद्भावको विषय देखेर उनलाई अचम्म पनि लाग्यो । ११ बर्षको हुँदा उनी देवी कुमारीबाट विदा भई साधारण जीवनमा आइन् ।
खासगरी महिलाको राजश्वला भएपछि कुमारीबाट विदा दिने चलन छ । शाक्य अहिले आफू इन्द्र जात्रालगायतमा नयाँ कुमारीलाई हेर्न जान्छिन् । आफु पनि यस्तै भएको महशुश हुन्छ ।त्यसबेला उनलाई रथ चलेका समयमा रमाइलो लाग्ने गरेको थियो । यी सबै सपना जस्ता पनि लाग्छन् ।
साधारण जीवनमा भने समाजका विविध आयामसँग परिचित हुन थालेकी छन् । त्यसैले उनलाई भेदभावप्रति अलिक अचम्म लाग्ने गरेको छ ।कुमारी रहेको भनी चिन्ने कतिपयले उनलाई सोध्ने एउटा प्रश्नचाहिँ अचम्मको छ । भन्छिन्,‘तपाईले बिहे गर्न हुँदैन हो, भनेर कतिपयले सोध्छन् ।’
कुमारी बनेकाको राशी अलिक कडा हुने भए पनि त्यससँग मिल्ने राशी भएका पुरुषसँग बिहे गर्न हुने उनी तर्क राख्छिन् । भन्छिन्,‘राशी मिलेको खण्डमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने छैन, गर्न मिल्छ ।’उनी चार बर्षको उमेरमा कुमारी चुनिएकी थिइन् अनि ११ बर्षको उमेरमा घर फर्किएकी थिइन् ।